Nhau - China yezvigadzirwa zvekurapa indasitiri yakatangisa munguva yegoridhe
China yezvigadzirwa zvekurapa indasitiri yakatangisa munguva yegoridhe
Sekutaura kwekambani yekutsvagisa misika Frost & Sullivan, chigadzirwa cheChina chekurapa nemusika wemidziyo zvinotarisirwa kupetwa kusvika paUS $ 53.7 bhiriyoni na2015. Kubva 2009 kusvika 2011, hurumende inotarisirwa kuisa mari inosvika US $ 124 bhiriyoni mukugadzirisa zvehutano, kunyanya muna 2011 segore rekutanga re "Gumi nemaviri reMashanu-reMakore Chirongwa", iro rinowana kuzadzikiswa kuzere kwehurongwa hwekuchengetedza zvekurapa, inova chinhu chakakosha munhoroondo yekushandurwa kwezvokurapa kweChina. Zvinokosha zvegore. Statistics inoratidza kuti muna 2011, indasitiri yezvokurapa nehutano yeChina ichava pechitatu pasi rose.
Tichitarisa kubva kudhata reMEDICA neCompaMED, yepasirose yekutanga indasitiri yekurapa yekuratidzira chikuva mu2010, indasitiri yezvokurapa yepasi rose yakachengetedza kusimudzira kwakasimba. Mwaka wadarika, chiyero cheMEDICA neCompaMED kuratidzwa zvese zvakaramba zvichikura, kunyanya chiyero chevaratidziri veChinese chakawedzera gore rimwe nerimwe. Izvi zvinoratidzawo kuvandudzwa uye kufambira mberi kweindasitiri yekurapa yeChina mumakore achangopfuura.
Sechiitiko chakakura muindasitiri yezvishina zvekurapa zveChina, iyo 2011 International Medical Instruments uye Equipment Exhibition (CHINA MED2011) ichaitirwa kuBeijing National Convention Center kubva munaKurume 25 kusvika 27. CHINA MED2011 inotsigirwa pamwe nebazi rezvehutano reGeneral Logistics department reChinese People's Liberation Army, China World Trade Center Co, Ltd., Huitong Xingye International Exhibition (Beijing) Co, Ltd. uye Dusseldorf Exhibition (Shanghai ) Co, Ltd. kubatsira makambani uye zvipatara muChina yekurapa chigadzirwa indasitiri yakatangisa munguva yegoridhe uye ikabata mukana wemusika.
Gadzira chikuva chepamusoro-soro uye wozvipira mukusimudzira kwepasirese
CHINA MED yakatanga kuvambwa muna 1989 uye yaibata kamwe chete pagore. Chiyero chakawedzera gore rimwe nerimwe, uye varatidziri vakaramba vachiwedzera. CHINA MED harisi chete hwindo rekuratidzira indasitiri yezvokurapa yepasi rose, asiwo pekutanga kumira kwemasangano epasi rose ekurapa kupinda muChina. CHINA MED, seyekutanga mudzimba wepasi rose wekurapa chiridzwa nemidziyo yekuratidzira inosimbiswa neInternational Exhibition Industry Association (UFI), yagara ichiomerera kuchinangwa chekudyidzana nedzimwe nyika uye hunyanzvi, uye yakazvipira kugadzira chikuva chekutengesa chepamusoro-kumagumo kuratidzira mu chokurapa chiridzwa nemidziyo indasitiri.
Kuti makambani abatsire zvirinani kuti vanzwisise mikana mitsva yemusika, varongi vanosimudzira zvine simba CHINA MED 2011. Chiratidziro chinotarisirwa kuve nenzvimbo yekuratidzira yemamirimita 30,000, vangangoita 550 uye vashanyi vanosvika zviuru makumi maviri nezvitanhatu, mauto nemahospital akasiyana emuno, uye kune vatengesi nevamiririri vazhinji vanotenga anopfuura mamirioni mashanu .
Ndichiri kukwezva kudyara muChina, murongi anoshandisa zvizere zviwanikwa zvekuratidzira zvepasi rose unit unit MEDICA uye makuru epasirese ruzivo rwekurapa mapuratifomu ekusimudzira chiratidziro pasirese. Zvinonzwisisika kuti parizvino matumba akasarudzika ari kutengeswa kunze, uye kugoverwa kwematumba akajairwa zvakare kwakasimba.
Uye zvakare, iyo webhusaiti yepamutemo yemurongi iri kupawo makumi maviri nemana maawa asina kuvhiringidzwa epamhepo masevhisi kune varatidziri nevashanyi, uye ichienderera ichivandudza iyo yese sevhisi. Kubva Kubvumbi 1, 2010 kusvika Zvita 22, iyo yakazara traffic kune webhusaiti yakasvika pa153,947 times, iyo yaive yakakwira zvakanyanya kupfuura iyo 119,988 times munguva imwecheteyo gore rapfuura, gore-gore-gore kuwedzera kwe28.30%. Murongi akagadzawo nharembozha yebasa revatengi 4006-234-578 kuti ape rubatsiro kunevashanyi nevaratidziri. Aya masevhisi akagamuchirwa nevaratidziri nevashanyi, uye vatengi vazhinji vanogutsikana.
Unganidza zvigadzirwa zvitsva uye uvhare mune zvinopisa misoro
Chimwe chiitiko cheCINA MED 2011 ndechekuti makambani anozivikanwa muindasitiri yezvokurapa acharatidza zvigadzirwa zvavo zvazvino. Parizvino, Toshiba yasimbisa kuti icharatidza ichangoburwa 640-slice computed tomography "Aquilion ONE", iyo inokodzera kuongororwa kwemoyo nechirwere, nekukurumidza kumhanyisa scanning, diki re radiation mwero uye mushandisi wekushandisa, uye mifananidzo yakajeka. US-China kubatsirana kunounza iyo "Da Vinci Nzira Yekuvhiya Robhoti" system zvakabatana zvakagadziriswa neIntuitive Kuvhiya kweUnited States neNASA nevamwe. Sezvo iri rakaomesesa-chizvarwa chechitatu robhoti yekuvhiya pasi rose, ine chiuno chakanyanyisa. Iyo inogona kutopedzisa zviito chaizvo izvo zvinonetsa kune vanhuwo zvavo, senge mabasa asingagone kuti endoscopic vanovhiya vapedze mune diki nzvimbo. Semumwe wevanogadzira michina yewairapiotherapy epasirese, veSweden Elekta vanojekesa dhijitari yayo yekuwedzera yekuwedzera Compact ine yakanaka yekuvandudza nzvimbo, ine simba Mosaiq bundu ruzivo manejimendi system, vhoriyamu kutenderera kwakasimba modulated arc kurapa tekinoroji (Vmat), Intuity, yakasanganiswa mhinduro yeshumba imaging uye kurapwa, uye Symmetry, nyowani-chizvarwa bundu kufamba manejimendi mhinduro.
Zvinopfuura makumi maviri zviitiko zvepa-saiti muzvikamu zvina, zvinosanganisira kufungidzira kwekurapa, hutano hwehutano, kiriniki tekinoroji, uye kubhidha nekutenga, zvichaitwawo panguva yekuratidzira. Pakati pavo, iyo "President Summit Forum" yakaitwa kekutanga. Iyi foramu ichakoka nyanzvi dzezvipatara nevatungamiriri veHurumende Inotenga Dhipatimendi reMinistry yeMari kuti vakurukure zvinhu zvakasiyana siyana zvekugadzirisa hupfumi hwezvipatara nekucherechedza zviitiko zvekubhidha pamwe nekutenga pachipatara ipapo. Kuti mushandire pamwe neyakajairwa kutungamira ideology uye mutemo we "Strategic Forward, Focus Down" muChina yezvokurapa nehutano indasitiri, CHINA MED2011 neChinese Society yeBiomedical Engineering ichaita musangano we "Pachezvako, Mhuri uye Nharaunda Hutano Ruzivo Network Sisitimu. Seminar ”, uye nyanya kukoka Nyanzvi kubva kuInstitute of Aviation Medicine, General Hospital yePeople's Liberation Army, Yechina Yemauto Medical University, uye nzvimbo dziri kure dzekuzivisa muShanghai, Shenyang, Wuxi nedzimwe nzvimbo dzakakurukurwa nekutaurirana nevemaindasitiri nyanzvi.
—— Nhau yeBeijing
Post nguva: Mar-02-2021